Sarimihetsika- Out linemovies: hivoaka rahampitso ny DVD “Don-tandroka” | NewsMada
Horonantsarimihetsika voalohany hivoaka amin’ity taona 2021 ity ny “Don-tandroka”, izay vokarin’ny Out linemovies. Miezaka manatsara ny kalitaon’ny zavatra ataony izy ireo akehitriny. Araka izany, hisy ny “Mega casting”…
Hivoaka, rahampitso, talata 26 janoary 2020, manerana ny Nosy ny « don-tandroka ». Horonantsarimihetsik­a malagasy novokarin’ny Out linemovies, izay hoenti-misantatra ity taona vaovao ity. Tantara natao ho an’ny rehetra izy ity, mifono anatra sy lesona ary ny trangam-piarahamonina amin’ny endriny samihafa, ao anatin’izany ny mampitebiteby sy ny mahatsikaiky isan-karazany. Maro ireo mpilalao efa sangany eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy no hamelona ity “Don-tandroka” ity. Horonantsary tsy latsa-danja amin’ireo efa nivoaka hatramin’izay izy ity raha ny fanomanana sy ny fanatontosana azy. Indrindra koa ny fisian’ireo mpamelona efa za-draharaha tsara amin’ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Out linemovies.
Hisy ny “Mega casting”
Hanatanteraka “Mega casting” izy ireo hitiliana izay handrafitra ny ekipa. Izany dia hotanterahina ny 3,4,5 febroary ho avy izao. Marihina fa ny farafanaterana antontan-taratasy ilaina amin’izany dia ny 31 janoary izao, eny amin’ny biraon’ny Out linemovies Androndra Ambohibary, akaiky ny faran’ny taxi-be 117/151.
Efa eo am-panomanana horonantsarimihetsika hafa indray ankoatra ny “Don-tandroka” izy ireo, ankehitriny ary mampanantena zavatra vaovao sy miavaka hatrany ny Out linemovies hanomezana fahafaham-po ho an’ny rehetra mpankafy ny horonantsarimihetsika malagasy.